Kufanele zihlanzwe kanjani izinsimbi zaselebhu | Xipingzhe
Abasebenzisi kufanele baqonde ukuthi ukunakekelwa kwensimbi nokugcinwa kuyikhono eliyisisekelo. Ngenxa yokulungiswa kwensimbi okuhle, okuhlobene nezinga eliphelele lethuluzi, izinga lokusetshenziswa kanye nezinga lempumelelo lokufundisa kokuhlola, njll. Ngakho-ke, ukususwa kothuli nokuhlanzwa yizinto ezivelele zokugcinwa kwensimbi.
Uthuli ikakhulukazi luyizinhlayiya zothuli olunenani elincane likagesi omile. Imvamisa intanta emoyeni, ihamba nokuhamba komoya, izonamathela entweni lapho ihlangana nayo, futhi icishe ingabonakali. Uthuli olunamathiselwe ku-specimen yemodeli luzothinta umbala walo, futhi uthuli ezingxenyeni ezihambayo luzokwandisa ukugqoka. Uma kukhona uthuli ezintweni ezisebenza ngogesi, lezo ezibucayi zizodala ukuvuza kwesifunda okufushane kanye nogesi. Uma kukhona uthuli kuzinto ezibalulekile zokunemba, lezo ezinzima zizokwenza izinsimbi zilahlwe.
Ngokuyinhloko kuhlanzwa i-glassware. I-Glassware ihlukaniswe ngama-glassware ajwayelekile kanye nama-glassware akhethekile. Kunezinhlobo ezimbili zokungcola okunamathiselwe kwi-glassware. Uhlobo olulodwa lungahlanzwa ngamanzi, kanti olunye uhlobo kufanele luhlanzwe ngemishini yokuhlanza ekhethekile. Ekuhlolweni, noma ngabe unhloboni yenhlabathi enamathiselwe kwi-glassware, izinto ezisetshenzisiwe kufanele zihlanzwe ngokushesha.
Vele, uma ufuna ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuhlanza, gwema imiphumela emibi ekuhlolweni nasekuhloleni imiphumela ebangelwa ukuntuleka kwenhlanzeko, futhi uvimbele ukungcola okuthelelanayo nobuthi ekulimaleni impilo ye-opharetha, ungakhetha futhi okugcwele- okuzenzakalelayo laboratory glassware waher. Okokuhlanza okuphephile nangendlela efanele.
Ikakhulukazi ekulawulweni kwezifo njengamanje nasemayunithi ezokwelapha, imisebenzi yezikhungo zokuhlola, zokuhlaziya kanye nokuqeda ukungcola iyaphuthuma, inzima, iyingozi futhi inzima. Ukuhlanza okwenziwe ngezandla ngokungangabazeki kuzokwandisa ubungozi bokuchayeka ko-opharetha kumagciwane. Indawo yokushisa ephezulu kanye ne-alkali ephezulu egumbini elingaphakathi le-laboratory glassware washer ingakhipha iprotheni, futhi iphrotheni ye-spike ayikwazi ukuthintwa ngempumelelo neseli elibambile, ngaleyo ndlela lisebenzise leli gciwane.
I-XPZ inezindlela eziningi zokuhlanza, ezingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende; isivinini sokuhlanza siyashesha, esisindisa kakhulu isikhathi sekhasimende. Isivinini sokomisa okusheshayo, umoya oshisayo odonsa umoya, okonga isikhathi esingu-35% kunokomiswa kwendabuko kuhhavini. Okubaluleke kakhulu, ubuchwepheshe bokufafaza obungu-360 °, izingalo zokufafaza ezingenhla nezingezansi zinamandla amakhulu okugudluza futhi zithola umphumela wokuhlanza owenelisayo.
Isikhathi Iposi: May-26-2020